Kooxda Yamayska oo xaqiiqsatay u soo bixitaanka sami finnalka tartanka tayaynta kooxaha heerka 1aad ee Mudug,(Sawirro). – Radio Daljir
Janaayo 28, 2013 12:12 g 0
Gaalkacyo, Jan 28- Ciyaar xiiso leh oo galabta ka dhacday garoonka kubadda cagta ee Cawaale ayaa kooxda Yamays waxay 2-0 kaga badisay kooxda Homboboro oo ka mida iyaduna kooxaha ugu magaca weyn gobolka Mudug.
Kulankan xiisaha lahaa oo bilowgiisii labada kooxoodba ay is waydaarsadeen weerar iyo weerar celis ayna abuureen jaanisyo fara badan ayaysan suurta galin inay wax gool ah iska dhaliyaan, waxaana qaybtii 1aad ay ku dhamaatay 0-0.
Isku soo laabashadii ka dib qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa dar dar waxaa garoonka la soo gashay kooxda Yamayska oo ka faa’iidaysanaysay difaaca kooxda Homboboro oo galabta yara jilicsanaa.
Teemka Yamays ayaa la hormartay goolkeedii ugu horeeyay kaasoo kooxda Homboboro ku riday niyad jab iyo wal wal ay ka galeen inaysan heli doonin fursado qaaliya, goolkaasi daqiiqado ka dib kooxda Homboboro ayaa heshay rigoore waxaana ka beel dareeyay xidigooda Xaamud Wardheere.
Dhawr Daqiiqo gudahood ayay kooxda Homboboro heshay rigoore kale waxaana iyaduna khasaariyay ciyaariyahanka C/laahi Habas oo markan ahaa gool hayaha kooxda.
Kooxda Yamayska ayaa sii dheeraysatay hogaankii ciyaarta ka dib markii ay heleen goolkii labaad kaasoo quusiyay kooxda Homboboro sidaas ayayna Homboboboro tartanka kaga hartay Yamayskuna u soo baxeen.
Isku soo wada duuboo ciyaartan ayaa ka duwanayd dhan walba tii shalay ka dib markii ciyaartan ay ku dhamaatay rabsho la’aan.
koobkan ayaa ku socda si xiiso iyo xamaasad leh, waxaana maalinta barri ah isku ballansan kooxaha Telcom iyo Homboboro.
Wixii talo iyo tusaalee ee ciyaarahan idin kaga aadan fadlan nala wadaaga noona soo gudbiya aaraah-diina iyo taladiina.
Dowladda Turkiga oo 1-Milyan oo doolar ugu deeqday howlgalka AMISOM